मलाइ यौन इच्छा एकदमै धेरै हुन्छ तर श्रीमानले अल्छी गर्नुहुन्छ अब म के गरौ ? किन महिलालाई वढि यौन इच्छा हुन्छ ?जानीराखौ !!
Home/रोचक/मलाइ यौन इच्छा एकदमै धेरै हुन्छ तर श्रीमानले अल्छी गर्नुहुन्छ अब म के गरौ ? किन महिलालाई वढि यौन इच्छा हुन्छ ?जानीराखौ !!
यौन चाहना महिला भन्दा बढी पुरुषमा हुन्छ । यो जन्मजात गुण हो । पुरुषमा हार्माेनहरु उत्तेजित हुने भएकाले यौन उत्तेजना पनि बढी हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर, पुरुषमा यौन क्षमता शरीरमा हर्मोनको गडबडी या कमीका कारण कमजोर हुने समस्या निम्तन सक्छ ।
हर्मोनको परिवर्तनको कारण पनि पुरुषमा यस्तो समस्या हुन सक्छ । कैयौंपटक हृष्टपृष्ट मानिस पनि नपुंसकता वा यौन क्षमता कमजोर हुने शिकार बनिरहेको पाइन्छ
यसकारण नपुसंकता (यौन क्षमता कमजोर) को कारण पत्ता लगाउन सकिँदैन् । खासगरी पुरुषमा सम्भोगको समयमा सही तरिकारले यौन क्रिया गर्न नसक्नु या शिघ्रपतन हुनु नपुसंकताको लक्षण हुन सक्छ । सामान्यत स् नपुसंकताको संबन्ध सिधा रुपमा ज्ञानेन्द्रियसंग हुन्छ, यस्तो अवस्थामा पुरुषहरू यसबारेमा जागरुक हुँदैंनन्
भने कैयौंपटक संकोचका कारण डाक्टरसंग परामर्श लिँदैंनन्, जसबाट रोग बढ्ने संभावना हुन्छ । नपुंसक व्यक्ति आफ्नो महिलासाथीसंग कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सक्दैन ।कुनै मानिसहरु नपुसंक नभएपनि घबराहट र मनको डर या कुनै मानसिक समस्याका कारण यौनकार्यका दौरान उत्तेजित हुन सक्दैनन् । पछि गएर सोही समस्या दीर्घकालिन बन्न जान्छ ।
खासमा नपुंसकता या बाँझोपनका लक्षण के हुन् त ? जो पुरुष सम्भोगका दौरान सही तरिकाले यौन क्रिया गर्न सक्दैंनन् या शिघ्रपतन हुन्छ, यो नपुसंकताको लक्षण हुन सक्छ नपुसंकता भएका पुरुषको लिंगमा कठोरता आउँदैंन, आएपनि लिंग चाँडै लुलो हुन्छ । सम्भोगका दौरान अचानक लिंगका कठोरतामा कमी आउनु पनि यसको लक्षण हो । नपुसंकताको सिधा संबन्ध ज्ञानेन्द्रियसंग हुन्छ । मानिसले संकोचबश या जागरुकताको अभावमा यसबारेमा केही थाहा पाएका हुदैंनन
नपुसंकता धेरै उमेर भएका व्यक्तिमा पाइन्छ, जसबाट महिलानजिक जान पनि उनीहरुलाई डर लाग्न सक्छ । बढ्दो उमेरसंगै यौन इच्छा पनि कम हुँदैं जान्छ । जो पुरुष यौन क्रियामा रुची राख्दैन र जसमा उत्तेजना हुँदैंन, उ पूर्ण रुपमा नपुंसक हुन सक्छ मलाइ यौन इच्छा एकदमै धेरै हुन्छ तर श्रीमानले अल्छी गर्नुहुन्छ अब म के गरौ ? किन महिलालाई वढि यौन इच्छा हुन्छ ?
विश्वका यी अनौठा देश : जहाँ न कहिलै रात पर्छ न त दिननै हुन्छ !
अलौकिक शक्तिकी देवी पाथीभराको दर्सन गर्नाले कसैले नसोचेको लाभ प्राप्त हुन्छ, एक चोटी पढ्नुस
सातवटा बच्चा जत्रै महिलाको पेट